Global Voices teny Malagasy » Nanazava ny Lanitr’i Japàna Nandritra ny Adiny Iray Ny Takonam-bolana Feno · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 18 Oktobra 2014 17:14 GMT 1	 · Mpanoratra Sayuri Ishiwata Nandika (en) i Nevin Thompson, Ntsoa
Sokajy: Azia Atsinanana, Japana, Fahasalamàna, Mediam-bahoaka, Siansa, Zavakanto & Kolontsaina
Ilay takonam-bolana feno tamin'ny 8 Oktobra, Fileovan'i Chiba, Japàna, nalain'i Les Taylor, CC 2.0.
Ny 8 Oktobra 2014 teo no fotoana voalohany tao anatin'ny telo taona nahitan'i Japàna takonam-bolana feno. Nifampitaona tany ivelany teo ambanin'ny lanitra midadasika ireo tapaka sy namana rehetra manerana ny nosy, ary nandefa ny fijerin'izy ireo mankany ambony.
Araka ny Tobim-panjakana Fandinihana ny Lanitra ao Japàna , afaka nojerena manerana ireo vondro-nosy ilay takonam-bolana feno, afa-tsy tany amin'ny nosy Ishigaki (faritra Atsimo Andrefan'i Kyushu).
Mitranga ny takonam-bolana ampahany rehefa tsy mifanitsy tsara ny masoandro, ny Tany sy ny volana. Toy ny takonam-bolana feno, tsy hita izy ireo raha tsy mandritra ny diavolana. Ny takonam-bolana feno anefa dia mitaky ny fifanitsian'ireo singa telo ireo tsara.
Mandritra ny takonam-bolana feno, bahanan'ny aloky ny Tany tanteraka ny hazavàna avy amin'ny masoandro , izay miteraka aloka maizina—ampahany lalina sy maizina indrindra amin'ny aloka—izay hisakanan'ilay singa mpibahana ny loharanom-pahazavàna. Mahita takonam-bolana feno noho izany ny mpijery iray tafiditra ao anatin'ilay aloka maizina.
Naharitra teo amin'ny adiny iray teo ho eo ilay takonam-bolana feno ny 8 Oktobra, izay nanome fotoana malalaka ireo mpijery mba handinihana azy.
Nitondra fomba tsy manan-tsahala maro karazana ireo vahoaka tao Japàna mba hijerena io takonam-bolana io. Ny “yogà mandritra ny takonam-bolana ” ohatra, dia nalaza tokoa.
東京ミッドタウンでは今年も皆既月食の日にあわせ、明日10/8（水）「月見ヨガ」を特別開催！　部分月食の始まりから皆既月食、部分月食の終わりまで皆既月食を観測できるのは2011年以来3年ぶり。http://t.co/JDtp9krxl3  pic.twitter.com/VJMyQLqlQM 
Tany amin'ny faritr'i Midtown ao Tôkyô, nifampitaona ny vondron'olona iray mba handray anjara amin'ny “yogà mandritra ny takonam-bolana” natao an-kalamanjàna. Novinavinaina hanomboka tamin'ny 7:30 alina ilay seho ary naharitra ora iray, izay faharetan'ilay takonam-bolana.
Raha ny mahazatra dia ao anaty trano no fanaovana yogà miaraka aminà vondron'olom-bitsy, izany no nahatonga ny fisian'ireo mpankafy yogà maro aminà toerana iray akaiky an-kalamanjàna ho seho tsy fahita. Olona 560 teo ho eo no nanatevin-daharana.
Raha nieritreritra aho fa mety hangatsiaka raha hanao izany an-kalamanjàna, dia nahafinaritra ihany anefa ny nivory niaraka tamin'olona 560.
Ny “Tôkyô SkyTree”, ilay tranobe avo indrindra ao Japàna, izay hazavainà jiro LED manga nankalazain'ireo nahazo ny Mari-pankasitrahana “Nobel” Japoney farany , ihany koa dia nandray anjara tao anatin'ireo fankalazàna io takonam-bolana io.
Nirotsaka an-tsehatra ny Tilikambon'i Tôkyô, marika iray hafa mivoitra (sady mampanembona ny lasa).
Mirehitra ho mavo kely indray mandeha isam-bolana fara-fahakeliny ny tapany ambanin'ny Tilikambon'i Tôkyô  hanamarihana ny takonam-bolana feno, antsoina hoe “Lomboka Diamondran'ny Volana”. Ho an'ilay takonam-bolana, novonoina ireo LED amin'ny tapany ambonin'ilay Tilikambon'i Tôkyô ary narehitra kosa rehefa diavolana. Mba hamoronana tontolo mamofom-pitiavana, dia nandrehitra labozia ihany koa ireo olona tao anatin'ilay tilikambo, teny amin'ny varavarakely 100 teo ho eo tao amin'io tranobe io.
今夜は皆既月食。みるみるうちに月が変化していきます。 ピンク色の東京タワーと月食がとても綺麗です。 #皆既月食  pic.twitter.com/u2eMKO1RdS 
Mijery ilay takonam-bolana feno aho. Mahatonga ny tontolo jerena hahafinaritra be ilay jiro mavo kelin'ny Tilikambon'i Tôkyô sy ilay takonam-bolana.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2014/10/18/64928/
 Tobim-panjakana Fandinihana ny Lanitra ao Japàna: http://www.nao.ac.jp/astro/sky/2014/lunar-eclipse.html
 October 7, 2014: https://twitter.com/voguejp/status/519396748608143360
 October 8, 2014: https://twitter.com/may_ols/status/519833464481136640
 hazavainà jiro LED manga nankalazain'ireo nahazo ny Mari-pankasitrahana “Nobel” Japoney farany: http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/2014/press.html
 October 8, 2014: https://twitter.com/tetsu_skytree/status/519848119215726592
 Tilikambon'i Tôkyô: http://www.tokyotower.co.jp/hot_topics/index.cgi?tno=1514
 October 8, 2014: https://twitter.com/kaorucojp/status/519788837724106752